INDIA: Xukuumada oo laalshay ismaamulka Muslimiinta Kashmiir • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / INDIA: Xukuumada oo laalshay ismaamulka Muslimiinta Kashmiir
INDIA: Xukuumada oo laalshay ismaamulka Muslimiinta Kashmiir
August 6, 2019 - By: Hanad Askar
Xisbi Xaakimka Xagjirka Hinduuga Hindiya BJP ayaa horey u sheegay inay burburin doonaan ismaamulka madaxa banaan ee kashmiir, waxayna sidoo kale Baarlamaanka dalkaasi horgeeyeen sharci cusub oo labo gobal loogu qeybinayo qeybta India maamusho ee Kashmiir.
Dikareeto shalay kasoo baxday xafiiska Raysalwasaare Modi ayaa lagu sheegay in la laalay Qodobka 370 ee dastuurka dalkaasi ee u fasaxay gobalka Kashmiir ismaamul u gaar ah.
Qorshaha xisbiga Modi oo markale ku guuleystay doorashadii dalkaasi ee bishii May ee sanadkan ayaa ah in la wiiqiyo awooda muslimiinta dalka India gaar ahaan maamulka Kashmiir oo ay kusoo rogeen xaalad deg deg ah iyo bandow.
Xisbiyada Mucaaridka ayaa si adag uga horyimid qorshaha xukuumada Modi oo ay ku tilmaameen mid lagu burburinayo nidaamka dimuquraadiga ah ee dalkaasi.
Ciidamada Hindiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay hawlgalo balaaran ka waday gobalka Kashmiir ayaa xabsiga dhigay qaar kamid ah siyaasiyiinta waaweyn ee gobalkaasi xilalka kasoo qabtay.
Arrintan ayaa dhinaca kale sare u qaaday xiisadii ka dhex taagneyd Hindiya iyo Pakistan oo iyagu tan iyo markii ay xoriyada ka qaateen dalka Ingiriiska isku heystay maamulka gobalka Kashmiir oo ay labada dhinac kala maamulaan.
Qaramada Midoobay ayaa baaq ay soo saartay maanta ugu yeertay labada dowladooda inay ka fogaadaan wax walba oo khatar ku keeni kara amniga gobalkaasi.